ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com ***ကျေးဇူးပါဆရာမ***
ကျွန်တော့နာမည်က မောင်အောင် အသက်က ၁၈ တက္ကသိုလ် တက်နေတာ ကျွန်တော် ကိုငယ်ငယ်ကတည်းကစာသင်ပေးတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ် နာမယ်က ဒေါ်လှတင် အသက်က ၃၅ လောက်ဘဲရှိဦးမယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘေး ၃ ခြံကျော်မှာနေတာလေ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆြာမ အိမ်မှာအိပ် အိမ်မှာစားဆိုတော့ ဆရာမကအဒေါ်တျောက်လိုဘဲ ဆယ်တန်းဖြေပီးနောက်ပိုင်း ဆြာမအိမ်ဘက် သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး....
ဆရာမကလည်းယောက်ကျား ရပီး စာမသင်တေ့ာဘူးလေသူ့ယောက်ကျားက သဘောင်္သားဘောစီ ရုပ်ကလည်းသန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ဆရာမကလည်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် တင်ကားကား ရင်ထွား
ထွားရဲ့သူ့တို့ မင်္ဂဆောင်ပီး တစ်လလောက်ဘဲကြာတယ် သူ့ယောက်ျားက သဘောင်္ပြန်တက်သွားတယ်ခုလည်းဆရာမ မလာစဖူး အလာထူးပီးအိမ်ရောက်နေတယ်ဆရာမရောက်နေတာလား ဆရာမသားဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲ မရှိပါဘူး သားရယ်ရွှေမိရွာအလည်ပြန်သွားလို့ရွှေမိပြန်မလာခင်သုံးလေးရက်လောက် အဖော်လာအိပ်ပေးစေချင်လို့ သားရလား ဟုတ် ရပါတယ်ဆရာမ ဘယ်တော့လာအိပ်ပေးကမလဲ ဆရာမမေးလိုက်တေ့ာ ဒီညလာအိပ်ပေးစေချင်တယ် သားမိုးအောင် ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာမ ခဏနော် သားယူစရာရှိတာ ယူလိုက်ဦးမယ် ပြောပီး ခဏနေ အိမ်ပေါ်ထပ်က ပြန်ဆင်းကာ ရပီ ဆရာမသွားမယ် အေးအေး အပြောနင့် အဖေနင့် အမေကို နူတ်ဆက်ကာ သွားလေသည် လမ်းတလျောက်စကားမပြောကာဆရာမရဲ့ အယ်နေတဲ့ တင်နှစ်ခု လမ်းလျှောက်ရင်းလှုပ်ပုံကိုကြည့် ကာ လီးပင်တောင်လာတော့သည် ဆရာမအိမ်ရောက်တေ့ာ ကျွန်တေ့ာအိပ်ခန်ူးဆရာမလိုက်ပြပီး သူ့အခန်းသို့သွားလေသည် ကျွန်တော်က တော့ အိမ်သာသွားပီး ဆရာမ ကိုမှန်းကာ တစ်ကြောင်းရိုက်လိုက်လေသည်။
မနက်မိုးလင်းတော့ အိပ်ယာထကာ နာရီကြည့် ပီး ဗိုက်ကရစ်သည်ရစ်သည်နဲ့ မို့ အိမ်သာသွားတက်လေသည် အိမ်သာတက်ပီးတော့ ဘေးကရေသံကြားတာနဲ့ ချောင်းကြည့်တာ ဆရာမ အကုန်ချွတ်ပီးရေချိုးနေတာ (အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်း အလယ် တွင် အပေါင်းပုံစံအပေါကရှိ်) ကျွန်တော်လည်း လိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပီး အိမ်သာမှာတင် မှန်းပီး ထုလိုက်လေသည် အဲ့နေ့က စနေကျောင်းမတက်ကဘူး ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလည်း ဆရာမ စောက်ပါတ်နဲ့ သူဆပ်ပြာတိုက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ နို့ဖွေးဖွေး တွေနဲ့ ဆရာမကိုလိုးချင်စိတ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ် ၁၂ ထိုးခါနီးကျတော့ ဆရာမကိုလိုးဖို့ အကြံတစ်ခုပေါ် လာတယ် ဆရာမ သားအိပ်မလို့ ၃ နာရီလောက်ကျရင် နိုးစမ်းပါသိလား သွားစရာရှနလို့ ပြောကာ အခန်းထဲဝင်ကာအိပ်မရဘဲ ဟိုလိမ့် ဒီလိမ့် လုပ်ရင်း နာရီကြည့်တော့ သုံးနာရီထိုးခါနီး ပီအာ့နဲ့ဘဲလီးကိုလက်လေးနဲ့ ဆွပေးနေကာ ခဏနေတေ့ာ တခါးသံ ကြားတော့ အိပ်ချင်ဆောင်ပီး ဘေးတံဇောင်းလေးနေလေသည်မကြာပါဘူး ဆရာမဝင်လာပီးနိုးရောကျွန်တော်လည်းမသိမသာလေး ပုဆိုး ကလေးမပေါ့်တပေါ် နှင့်ပက်လက်လှန်ပီး အိမ်ချင်ယောင်ပုံစံပြောင်းပီးဆောင်လိုက်တယ်ထိုချိန်အစွမ်းကုန်တောင်နေတဲ့ လီးက ပုဆိုးပင်အပေါ် လွင့်ထွက်တော့မည့်အလားဆရာမနိုးသံမကြားတော့လို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ သူ့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့် လီးပေါ်မှာအစုံလိုက်မိုးအောင်လည်းပေါင်ကိုကုတ်ချင်ယောင်ဆောင် ပီး ပုဆိုးကို လီးနဲ့ မပေါ့်တပေါ် ထားတော့ ဆရာမ ဖြတ်ခနဲ့ ပုဆိုးဆွဲလှန်လိုက်သည် ကျွန်တော်လည်းဆက်ပီးယောင်တဲ့ပုံနှင့်လီးကုဖြည်းဖြည်းချင်းဂွင်းထုနေသည်ဆရာမလည်း ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်လီးကိုကုန်း စုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော် လည်း အယောင်ဆောင်လို့မရတေ့ာဘဲ အသံပါထွက်သွားသည် ဆရာ မကတော့ အစောကြီးကတည်းကသိသလိုနှင့် စုပ်ဆဲ ကျွန်တော်လည်းဆရာမယောက်ကျား တစ်လ အတွင်းမှာတော်တော်သင်ပေးသွားတာဘဲဟု စိတ်ထဲကကျေးဇူးတင်နေသည် ခဏနေတော့ စုပ်စုပ် ဆရာမ မြန်မြန်လေးကျွန်တောပီးတော့မယ် ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်အား ဆရာမ ပါစပ်ထဲကို သုတ်ရည်များပန်းထဲမိတေ့ာအားနာမိသားဆရာမကမပြောမဆိုနှင့် ပါးစပ်ကိုတေ့စုပ် ကာ လျှာနှင့်ကလိနေတော့ ရွံရွံသလိုလို ဖြစ်ပေမယ် ကျွန်တော့် လီးပင်ပြန်ရ်ျည တောင်လာခဲ့ပီ ကျွန်တော်လည်းဆရာမ အကျီင်္ချွတ်ပေးပီး နို့တွေကိုစို့ပေးနေသည် အားအင်းအား ဆရာမငြီးသံတွေပင် အခန်းထဲ ဆူညံနေသည်ကျွန်တော်လည်းနို့စို့ပီးတော့ စောက်ပါတ်ကိုလျှက်ပေးနေသည် စောက်ပါတ်က ရွှဲ စိုနေသည့်အရည်တွေက ဆရာမ၏ ဆာလောင်စိတ်ကိုသိနိုင်ပေသည် ကျွန်တော်လည်းလျှက်တာဝတော့ ဆရာမ ပေါင်နှစ်ချောင်းကားကာလီးဒစ်နှင့်စောက်ပတ်ကိုအပေါ် အောက်ဆွဲပေးတေ့ာဆရာမညည်းသံနှင့်အတူတူကော့ကော့တက်နေသည်ကျွန်တော်လည်းဆရာမအကော့မှာစောင့်ထိုးလိုက်သည် အား မိုးအောင်နာတယ် ဖြည်းဖြည်းပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ညင်ညင်သာသာပင် လိုးပေးနေသည် ခဏနေတေ့ာ ခုတင်အောက်ဆင်းကာမှန်တင်ခုံပေါ်လက်နှင့်ထောက်ခိုင်းကာ အနောက်ကနေ အချက် ၃၀ လောက်စောင့်ရင်း တချီပီးသွားသည် ခဏနေတေ့ာရေတူတူချိုးရင်းဆရာမကိုအနောက်ကနေစောင့်ကာ တစ်ချီပီးသွားလေသည် ဒီလိုနှင့် တူတူအိပ် တူတူရေချိုး ရင် တနေ့ တနေ့ ကာမအရသာကို ခံစားလေသည်​။
တူညီတဲ့ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် အဖြစ်အပျက်တိုင်းဟာ မှန်တယ် "" ဒီည "" သီချင်းသံ တိုးတိုးငြိမ့်ငြိမ့်လေး ၊ ခပ်မှိန်မှိန် မီးရောင်လေးနဲ့ Aircon ခပ်စိမ့်စိမ့် လွတ်ထားတယ့် mini bar လေးထဲမှာ အသက် ၃၀ အရွယ်ခန့် couple တစ်တွဲနဲ့ လူတစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်၊ ၀ိုင်လေးသောက်ပြီး စကားပြောနေကြတယ့် မြင်ကွင်းဟာ တခြားလူတွေ အတွက် ဘာမှ မထူးခြားစရာပါ။ ထူးခြားတာက တွဲထိုင်နေတယ့် မိန်းကလေးဟာ ရှေ့မှာ ထိုင်နေတယ့် အမျိုးသားရဲ့ မိန်းမ ဖြစ်နေပြီး သူတို့ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် cuckold night out လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သူတို့ ၃ ယောက်သာ သိနေခြင်းကလည်း သူတို့အတွက် ပိုပြီး စိတ် relax ဖြစ်နေစေပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ ညာခြေမှာ HW စာလုံးလေးပါတယ့် Ankle Chain လေး ၀တ်ထားတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ကြာလာတယ့် အချိန်နဲ့ အတူ တက်လာတယ့် ၀ိုင်ရဲ့ ဒီကရီကလည်း သူတို့ကို ပိုပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေးလာစေတယ်။ ငယ်လေး ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခနနေရင် ကြုံရတော့မယ့် အတွေ့အကြုံကို စဉ်းစားမိတော့ စိတ်ထဲ ဖျတ်ခနဲ့ ကြက်သီးထမိ သလို၊ ကို့ကို လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ ရင်ထဲ ခံစားမှု တမျိုး ဖြတ်ပြေးသွားတယ်။ ကို ကိုယ်တိုင်က ဒါကို လိုလားလို့ ဒီလိုနေပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် တဖက်ကလည်း အားနာနေမိသား။ ခါးကို ဖက်ပြီး လူကို သူ့ရည်းစားလို မှတ်ပြီး စကားပြောနေတယ့် လူကို သေချာ ပြန်ကြည့်မိတယ်။ စကားပြော မွန်ရည်ပြီ့း ယောကျာင်္းဆန်ဆန် ကိုလူစိမ်းဆီက ရေမွေးနံ့ သင်းသင်းရတယ်။ ကို စိစဉ်ပေးတယ့် သူကိူ ငယ်လေးကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျလို့ လက်ခံခဲ့တာပါ။ သူနဲ့ ကို နဲ့ကတော့ စကားတွေ ပြောနေကြတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက် ယောင်္ကျားဆန်ဆန် တစ်မျိုးဆီ ကြည့်ကောင်းကြတယ်။ ဒီလို လူချင်းမတွေ့မီ ညပိုင်း chat တွေ မှာ ပုံတွေ ပို့၊ စကားပြော ၊ Viber cuck လုပ်ခဲ့ကြတာတွေ သတိရမိတော့ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ တခုခု အထိ ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတာ သတိရပြီး ရှက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ ခေါင်းကလေး ပုမိသေး။ ခနနေတော့ “ ကိုယ်တို့ သွားကြရအောင် “ ဆိုတယ့် ကို့ အသံကြောင့် ငယ်လေး အတွေးလွန်နေတာလေး ရပ်သွားတယ်။ စားပွဲပေါ်က ၀ိုင်ပုလင်းလဲ ကုန်ပြီ။ နာရီ ကြည့်မိတော့ အချိန်လည်း ၁ နာရီခွဲလောက် ကြာသွားတယ။် ငွေရှင်းပြီး ဆိုင်က ထွက်လာတော့ ကိုက လမ်းလျှောက်ကြရအောင် ဆိုတာနဲ့ ၃ ယောက်သား ဆိုင်ရှေ့ ကမ်းနားလမ်း အတိုင်း ဖြေးဖြေး လျှောက်လာကြတယ်။ လေအေးအေးလေး တိုက်နေတာက စိတ်ကို ပိုလန်းဆန်းသွားစေတယ်။ ခင်လေးက အလယ်မှာ။ ကိုက ညာဖက်က၊ သူက ဘယ်ဖက်က ။ အတူ လျှောက်လာကြရင်း လမ်းမီးတိုင်နဲ့ နည်းနည်း ဝေးတယ့်နေရာ ရောက်တော့ ကိုက ခင်လေးကို တခုခုပြောချင်တယ့် ပုံနဲ့ ကြည့်တယ်။ “ကို ပြောစရာရှိ ပြောလေ။” “အင်း ကိုယ်စိတ်ထဲ ရှိတာလေး လုပ်ကြည့်ချင်လို့” “ဟုတ်.. ကို ” “ကိုတို့ ငယ်လေးကို လက်တစ်ယောက်တစ်ဖက် ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက်ချင်လို့” လူသွားလူလာ နည်းနည်းကျဲတယ့် နေရာရောက်တုန်းမို့ “အင်း ကို့သဘောလေ” ------------------------------- ငယ်လေးလက်ကို သူတို့ တစ်ယောက် တစ်ဖက်ဆီ ဖွဖွဆွဲပြီး လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ ကို့ ကြည့်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံပဲ။ခင်လေး သဘောပေါက်ပြီ။ ကို သဘောကျတယ့် cuckold sign လေးထဲကလို လုပ်နေတာပဲ။ cuckold sign ထဲမှာက ယောင်္ကျား ၂ ယောက်ကြားမှာ မိန်းမတစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်နေတယ့် ပုံလေး။ သာမာန်ကြည့်ရင် သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် သေချာတွေးကြည့်မှ လင်ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က သူ့မိန်းမကို နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပေးပျော်မယ်။ သူကဘေးက ကြည့်ပြီး သူ့မိန်းမကို ခံစားမှုအသစ်တွေ ပေးတယ့် cuckold fantasy လေ။ ငယ်လေးရဲ့ ကိုက အဲဒါကို သိပ်သဘောကျတယ်။ ၁၀ မ်ိနစ်လောက် လျှောက်လာပြီး လမ်းမပေါ် ရောက်လာတယ်။Taxi တစ်စီးတားပြီး စီစဉ်ထားတယ့် hotel ကို ထွက်ခဲ့တယ်။ ကိုနဲ့ ငယ်လေးက တခန်း၊ ဟိုတစ်ယောက်က တခန်း။ ငယ်လေး ခြေလက်ဆေးကြော၊ ၂ ယောက်အိပ် ကုတင်ပေါ် အသာထိုင်နားနေတုန်း ကို ငယ်လေးနား လာတယ်။ “ငယ်လေး အဆင်ပြေရဲ့လား” “ဘာကိုလဲ ကို” “အခုည စိတ်သက်တောင့်သက်တာ ရှိရဲ့လားလို့ပါ။” “ရပါတယ် ကိုရဲ့။ ငယ်လေးတို့ သေချာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားလေ။ ကို ပျော်မယ်ဆိုရင် ငယ်လေး ဘာမဆို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။။။။အဲဒါ ကို့ကို ချစ်လို့” “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငယ်လေးရယ်…” ကို ငယ်လေး နဖူးကို ဖွဖွ နမ်းတယ်။ ကို သူ့ mp3 လေးထုတ်ပြီး သီချင်း တိုးတိုးဖွင့်တယ်။ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ် ငယ်လေးဘေးနား လာကပ်ထိုင်ပြီး ပခုံးလေးကို ဖက်ထားတယ်။ ကို့ ရင်ခွင်ထဲ အသာလေး မှေးနေရင်း သီချင်းသံလေးနားထောင်နေမိတယ်။ ခနနေတော့ တံခါးခေါက်သံ တိုးတိုးကြားရတယ်။ ၂ ယောက်လုံး ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြန်ကြည့်မိကြတယ်။ ကို့ကို ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ အသာထပြီး တံခါးဘက်ကို ထွက်သွားတယ်။ ဟိုတစ်ယောက် ၀င်လာတယ်။ သူ့ပုံစံက ခုနကလို ဖော်ဖော်ရွေ ရွေ သိပ်မရှိတော့သလိုပဲ။ ကိုပြောပြဖူးတာ ပြန်သတိရတယ်။ Cuckold လုပ်ရာမှာ Bull လို့ခေါ်တယ့်သူရဲ့ သဘောက ဒီလိုအချိန်မှာ စက်ရုပ်နည်းနည်း ဆန်မယ်။ စိတ်ခံစားမှု ထိန်းထားမယ်။ သူ့ရဲ့ တာဝန်က cuckold husband နဲ့ hotwife ကျေနပ်လောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့ပဲ။ သူ အခန်းထဲ ၀င်လာပြီး ကို့ကို ကြည့်တယ်။ ကိုက ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ သူနဲ့ ကိုနဲ့ ငယ်လေးဘက်ကို အတူလျှောက်ဝင်လာတယ်။ ကိုက ငယ်လေးရှေ့မှာ ရပ်ပြီး လက်ကမ်းပေးတယ်။ ကို့လက်ကို ဆွဲပြိး အသာ ထရပ်တယ်။ ကိုက ငယ်လေးလက်ကို ဆွဲပြီး သူ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးတယ်။ ငယ်လေး နောက်လက်တဖက်က ကို့လက်ကို ကိုင်ထားဆဲ။ သူက ငယ်လေးကို သူ့ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းဆွဲယူတယ်။ သူ ငယ်လေးနောက် မတ်တပ်ကပ်ရပ်တယ်။ ပြီး နောက်ကနေ သူ့လက် ၂ ဖက်နဲ့ ငယ်လေး ခါးကို ဖက်လိုက်တယ်။ ကိုက တော့ ငယ်လေးတို့ကို ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ကြည့်လို့။ ခါးမှာ ဖက်ထားတယ့် သူ့လက် ၂ ဖက်က အပေါ်ကို တက်လာတယ်။ ၀တ်ထားတယ့် အပေါ်အကျီကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲမပြီး ချွတ်တယ်။ Bra ၀တ်ထားတယ့် ငယ့်ရဲ့ ရင်နှစ်မွာကို လက် ၂ ဖက်နဲ့ အုပ်ပြီး သူ့ကို မော့ကြည့်တော့ သူက ငယ့်လက် ၂ ဖက်ကို အသာ ဖယ်တယ်။ Bra အောက်ကနေ လက်ရှိုပြီး ငယ့်ရဲ့ ရင်သားတွေကို သူ့လက်နဲ့ အသာပင့်ကိုင်တယ်။ Bra ကို အပေါ်မ လိုက်တော့ ငယ့်ရဲ့ ပြည့်ဖြိုးနေတယ့် နို့ ၂ လုံးဟာ အပြင်ကို ထွက်လာတော့တယ်။ နောက်က ကလစ်ကို ဖြုတ်ပြီးနောက် နို့ ၂ လုံးဟာ ငယ့်အပေါ်ပိုင်းမှာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် နဲ့ ရှိနေတော့တယ်။ နို့ အောက်ကနေ လက် ၂ ဖက်နဲ့ အသာပင့်ကိုင်ပြီး ဖွဖွ ပွတ်ပေးတယ်။ နို့သီးဘေးနားလေး တ၀ိုက်နဲ့ ထိပ်ကလေးတွေကို သူ့လက်ချောင်းလေးနဲ့ ၀ိုက်ပြီး ဆော့ပေးတော့ စိတ်ထဲမှာ ဖျင်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ထောင်လာတော့တာပေ့ါ။ ငယ့်ကို ကြည့်နေတယ့် ကို့မျက်လုံးကို တခါမှ ဒီလိုဖြစ်တာ မတွေ့ဖူးဘူး။ အရမ်း sexy ဖြစ်ပြီး အရောင်တောက်နေတယ့် ကို့ မျက်ဝန်းရဲ့ အရှိန်ဟာ ငယ့်စိတ်တွေကိုပါ နိုးကြားလာစေတယ်။ ကို ငယ်တို့ ဆီကို လျှောက်လာတယ်။ ငယ့်ကို မတ်တပ်ရပ် သူနဲ့ ကိုနဲ့ ၂ ယောက် ကြားမှာ ထားပြီး အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းကို အတူ ပွတ်သပ်ခံစားတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပွတ်သတ် နှိုးဆွလို့ဖြစ်တယ့် ခံစားမှုကို ငယ်ကောင်းကောင်း ခံစားဖူးပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ယောင်္ကျား ၂ ယောက်ရဲ့ ( အထူးသဖြင့် ကိုယ့် ယောင်္ကျားရှေ့မှာ ) အထိအတွေ့ကို တပြိုင်တည်း ခံရတယ့် ခံစားမှုကတော့ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ နိုးကြားတက်ကြွ ခြင်းနဲ့ အဲဒိ အရသာတွေမှာ ငယ် တဖြည်းဖြည်း ပျော်ဝင်လာခဲ့ပြီ။ ------------------- ကုတင်ပေါ်ကို ၃ ယောက်အတူ တက်လိုက်ကြတယ်။ ခေါင်းရင်းပိုင်း ကို သွားတယ်။ ငယ့်ကို အလယ်မှာထားပြီး ကိုက ညာဖက်၊ သူက ဘယ်ဖက်မှာ နေရာယူတယ်။ ကုတင် ခေါင်းရင်းကို မှီပြီး ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ ကို ဘာလုပ်မလဲ ငယ်သိပြီ။ တဖက်ဆီက လာတဲ့ အထိအတွေ့၊ ငယ့်နို့တွေကို တဖက်စီ စို့ပေးနေတဲ့ ကိုနဲ့ ကိုလူစိမ်း။ ငယ့် ကိုယ်မှာ ကြက်သီးဖုကလေးတွေ ထလာပြီး စိတ်ထဲမှာ စိုစိုစွတ်စွတ် ခံစားလာရတယ်။ ကုတင်ခေါင်းရင်း မှီထားရာကနေ Position ပြင်တယ်။ ငယ့်ကို ကုတင်ပေါ် လှဲစေတယ်။ ကိုက ထိုင်ပြီး ငယ့် ခေါင်းကို သူ့ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးစေတယ်။ အောက်ပိုင်းကို ရွေ့သွားတဲ့ ကိုလူစိမ်းရဲ့ လက်က ငယ့်ခြေတံနဲ့ ပေါင်အတွင်းသားတွေကို စကပ်အောက်ကနေ စုန်ဆန် ပြေးလွားနေရင်း ခဏနေတော့ စကပ်ချိတ်ကလေးဆီ ရောက်လာတယ်။ ချိပ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး စကပ်အောက်နားစကနေ အသာဆွဲချချွတ်သွားတယ်။ ငယ့်ကိုယ် မှာ ပင်တီ အနီကလေးက လွဲလို့ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ ပေါင်တံလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ထိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အားထည့်ပြီး စေ့ထားတဲ့ ပေါင်တံ ၂ ခုဟာ အဲဒိ နှုတ်ခမ်းကြောင့် တဆတ်ဆတ် တုန်လာတော့တယ်။ ခဏနေတော့ ကိုလူစိမ်းလက်က ခါးပေါ်က ပင်တီကို လာဆွဲတယ်။ ငယ့်လက်က ဖျတ်ခနဲ ပင်တီကို ပြန်ဆွဲထားမိတယ်။ သူ့လက်လည်း ရပ်သွားတာပေါ့။ ကို့ကို ငယ် မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုက ပြုံးပြီး ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ ဆွဲထားတဲ့ ပင်တီစကို လွတ်ပေးလိုက်တော့ ပင်တီကလေးဟာ ကိုလူစိမ်းလက်ထဲ အလိပ်လိုက်ကလေး ပါသွားတော့တယ်။ ငယ် မျက်လုံး မှိတ်ထားလိုက်မိတယ်။ ပေါင်တံလေးကိုလည်း စေ့ထားမိတယ်။ ငယ့် ပန်းကလေးကို တစိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက် ကြည့်နေမှာကို စိတ်ထဲ ရှက်နေမိတယ်။ ကိုကတော့ ငယ့်လက်ကလေးကို အသာဖြစ်ပြီး အားပေးရှာတယ်။ ဗိုက်ပေါ်မှာ ငွေ့ငွေ့ကလေးရှိတယ့် အသိနဲ့ ကိုလူစိမ်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းရောက်လာတယ်။ ဗိုက်ဘေးက ခါးသားနေရာလေးတွေနဲ့ ဗိုက်ပြင်ပေါ်ကို ရှပ်တိုက်သွားတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ မျက်လုံးမှိတ်ထားတဲ့ ငယ့် စိတ်ထဲ လွင့်သွားလိုက်။ မြင့်သွားလိုက် နဲ့ပါပဲ။ ဗိုက်ပေါ် နမ်းပေးနေရင်း လက် ၂ ဖက်ကလည်း ပေါင်တံလေးတွေပေါ် ဖြတ်ပြေးနေတော့ ငယ့်မှာ ၂ ဖက် ညှပ်တိုက်ခံရတဲ့ အနေအထားနဲ့ ပေါင်တံလေးတွေဟာ အားပျော့လာတော့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ စေ့ထားတဲ့ ငယ့်ပေါင်တံတွေဟာ အားပျော့သွားလို့ ဟသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ စစ်ဗျူဟာ သိတဲ့ စစ်သူကြီးအလား ငယ့် ပေါင်ကြားထဲကို နေရာ ၀င်ယူလိုက်တော့တယ်။ ငယ့် ပေါင် ၂ ခုကို အောက်ကနေ ပင့်ပြီး မ ၊ ဘေးကို လက်နဲ့ ကားထုတ်ပြိးတဲ့နောက် နောက်ဆုံးခံတပ် ၀တ်ရည်တွေ လူးနေတဲ့ ပန်းကလေးကို သူသ်ိမ်းပိုက်နိုင်သွားပြီလေ။ ကိုလူစိမ်းရဲ့ ခေါင်းဟာ အောက်ကို ဆတ်ခနဲ နိမ့်သွားတယ်။ ငယ်လန့်ပြီး လက်သီးကလေးကို တင်းတင်းဆုပ်မိတယ်။ ခဏအကြာမှာ အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတွေ ငယ့်ဆီက ထွက်လာတယ်။ ငယ့် ပန်းကလေးဆီက ၀တ်ရည်တွေ အိုင်လာနေတာကို ခံစားသိနေရတယ်။ ပွင့်ဖတ်ကလေးတွေ ကြားမှာ ပြေးလွားနေတဲ့ လိပ်ပြာလေးလို သူ့လျှာဟာ ထက်အောက် စုန်ဆန်ပြေးလိုက်၊ ဝေ့၀ိုက်ကာ တိုးလိုက်နဲ့ ငယ့်မှာ သူ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံစားနေရတာပေါ့။ “အ. အ.. ကို .. ကို ..” ကို့နံမည်ကို ခေါ်ညည်းမိတယ်။ ခေါင်းက ဘယ်ညာ ရမ်းနေမိပြီး ချွေးလေးတွေ စို့လာတယ့် ငယ့်မျက်နှာကို ကိုက မိုးကြည့်နေပြီး “ငယ် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်အားရအောင် ခံစားနော်။.. ငယ်အဲလို ခံစားရလေ ကိုယ်စိတ်ထဲ ကျေနပ်လေပဲ၊ ချစ်လိုက်တာ ငယ်လေးရယ် “ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ကနေ ခပ်သွက်သွက် ဖြစ်လာတယ်။ ခပ်သွက်သွက်ကနေ ပိုမြန်လာတယ်။ “ အား ကို .. ကောင်းလိုက်တာ ကို.. ငယ် လာချင်ပြီ ကို..” “ အို.....ငယ် ….ငယ် ခံစားလိုက် ငယ်။ ချစ်လိုက်တာ ငယ်လေးရယ်၊ “ သူ့လျှာက Timing အမြန် နဲ့ ဖိတိုးမွေနှောက်၊ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ပါ လက်သည်းနဲ့ ဖွဖွ ကုတ်ခြစ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ငယ့် စိတ်တွေ လေထဲ လွင့်ထွက်သွားသလို ဖြစ်ပြီး ကို့လက်ကို အားကုန် ဖြစ်ညှစ်ရင်း “ကိုရေ … အား … ကိုရယ် အား…..အား အား..….” ငယ် ပြီးသွားတယ်။ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကလေး ကိုယ့် ပြန်ကိုက်ထားမိပြီး အမောဖြေနေရတယ်။ ----------------------------------------------------- ငယ်လေးရဲ့ ပေါင်ကြားကို နေရာဝင်ယူလာတဲ့ အတွေ့ကြောင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ယောကျာင်္းပီသတယ့် ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်တယ့် ကိုလူစိမ်းပါ။ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ့် သူ့ရဲ့ လိင်တံဟာ ရှည်သွယ် ဖြောင့်စင်းပြီး လုံးပတ်နဲ့ အရှည်ဟာ သင့်တင့်မျှတမှု ရှိနေတယ်။ “ ငယ်လေး….” ခေါ်သံကြောင့် မော့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ဝန်းထဲမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ နဲ့ ကို။ တကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပါလား။ ကိုက ငယ့်နို့တွေကို အသာအယာ ထပ်စို့ပေးတယ်။ ကိုလူစ်ိမ်းရဲ့ ခေါင်းဟာ နောက်တကြိမ် နိမ့်သွားပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ သူ့ရဲ့ လျှာဟာ ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကို ဝေ့၀ိုက်ပြီး ဆော့ပေးနေတယ်။ ငယ် အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာရပြန်တာပေ့ါ။ ငယ့်ညီမလေး ကို တမင်မထိပေးပဲ ဘေးနားလေးတွေကိုပဲ ဆော့ကစားနေတာက ငယ့်ကို ပိုကြွလာစေတယ်။ ခါးလေးကို မသိမသာ သူ့နှုတ်ခမ်းနောက် လိုက်ရွေ့ပေးမိတယ်။ ညီမလေးအတွင်းပိုင်းထဲက တဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အတူ ရှေ့ပြေး ၀တ်ရည်တွေ ဆင်းလာရပြန်ပြီပေါ့။ ငယ် ထပ်လိုချင်လာပြီ။ သူကတော့ ဒါကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘေးနားတွေကိုပဲ ဆက်လုပ်ပေးနေတယ်။ ငယ်လေး ကို့ကို မော့ကြည်တယ်။ “ငယ်လေး လိုချင်ပြီလား..” ခက်လိုက်တဲ့ ကိုနော်။ ဒီမှာ ဘာဖြစ်နေပြီလဲ သူသိသားနဲ့။ လူကို ညည်းစဲ နေကြတာလား။ ကိုက ထပ်မေးတယ်။ “ငယ်လေး ….” “ အာ.. ကိုရာ … ဘာလို့မေးနေတာလဲ လုပ်မယ့်ဟာ လုပ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး..” ဆိုတော့ ကိုက ငယ့် ပေါင် ၂ ခုကို မပြီး ကားပေးတယ်။ ကိုလူစိမ်းရဲ့ လိင်တံဟာ ငယ့်ညီမလေးနား နီးကပ်လာတယ်။ အော် ကိုရယ် ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုယ်တိုင် ပေါင်ဖြဲပေးတာပါလား။ သူ့ရဲ့ လိင်တံ ငယ့်အဖုတ်ဝနား ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ ငယ်မထင်မှတ်တယ့်အရာကို ကို လုပ်လိုက်တော့တယ်။ ကို့ရဲ့ လက်ဟာ ငယ့်အဖုတ်လေးနား တရမ်းရမ်း ဖြစ်နေတယ့် လိင်တံကြီးကို ဖမ်းပြီး ငယ့်အဖုတ်လေးထဲ တေ့သွင်းပေးတော့တယ်။ တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ တိုးဝင်လာတဲ့ ခံစားမှုဟာ အခါတိုင်း ကိုနဲ့တုန်းကနဲ့ မတူပါ။ ငယ့် အဖုတ်လေးထဲ ပြည့်ဝင်လာနေတဲ့ လီးကြီးဟာ အတွင်းနံရံတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ဟိုး..အဆုံးထိရောက်သွားပြီ။ တဖြည်းဖြည်း စလာတဲ့ လှုပ်ရှားမှု နဲ့အတူ လီးကြီး ငယ့်အဖုတ်လေးထဲမှာ ရှေ့နောက် ရွေ့နေတယ်။ ပြည့်သိပ်နေတဲ့ ခံစားမှု ၊ ရွေ့လျား ပွတ်တိုက်နေတယ့် အတွင်းသားတွေနဲ့ ထိမိမှုတွေနဲ့ အတူ ငယ် စိတ်တွေဟာ အဲဒီခံစားမှုတွေကို ပိုပို လိုချင်လာမိနေတယ်။ ကိုလူစိမ်းရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ ပိုပိုမြန်လာတယ်။ ပိုပို အားပါလာတယ်။ ငယ့် ကိုယ်ဟာလည်း ပိုပို လှုပ်ရမ်းလာနေတယ်။ လီးကြီး အဖုတ်လေးထဲ ပိုပို ၀င်စေဖို့ ငယ့် ပေါင် ၂ ချောင်းကို မကားပြီး ကူပေးနေသူက ငယ့်ရဲ့ ကိုရယ်ပါ။ ကိုယ့်မိန်းမ အဖုတ်ကို ကိုယ်တိုင် ဖြဲပေးပြီး သူများလိုးတာ ကို ကြည့်နေတဲ့ ငယ့်ရဲ့ ကိုပေ့ါ။ ------------------------------ ဆောင့်ချက်တွေ နည်းနည်း အရှိန်ကျသွာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုလူစ်ိမ်းက ကို့ကို လက်ဟန်နဲ့ တစ်ခု ပြတယ်။ ကို ငယ့် ခေါင်းပေါ်ဘက် လာပြန်ထိုင်ပြီး ငယ့်ခေါင်းကို သူပေါင်ပေါ် အုံးစေတယ်။ ငယ့် ပေါင် ၂ ခု ကို မကိုင်မြောက်ပြီး အပေါ်ကို ကွေးပြီး တွန်းတင်တာ ခံရတယ်။ သူ့တကိုယ်လုံး အားနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ချပြီး လိုးပါတော့တယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ စိပ်တာတယ်။ “ အမလေး …. ကို….. အ… အ အား……….. ကိုရေ…” ငယ် ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းပြီး သူ့ဆောင့်လိုးချက်တွေ အောက်မှာ အလူးအလဲ ခံစားနေရတော့တယ်။ ကိုလူစိမ်း အားစိုက်ထုတ် သလောက် ငယ့်မျက်နှာမှာ ခံစားမှုက ပေါ်နေတော့ ကို ရယ်လေ။ ငယ့် မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်၊ လက်ကလေး ကိုင်လိုက်၊ နဖူးလေး နမ်းလိုက်နဲ့ ကျေနပ်နေရှာတာ မြင်ရတော့ ငယ်လည်း ပျော်လာတယ်။ “ ကို ပျော်လားဟင်” “ ပျော်တယ် ငယ်။ အရမ်း ပျော်တယ် “ ဆိုတဲ့ ကို့အသံဟာ စိတ်လှုပ်ရှား ဟိုက်မောနေပါတယ်။ ကို့ရဲ့ လိင်တံလေးဟာလည်း တောင့်တင်းနေတာ ငယ်တွေ့ရတယ်။ မိန်းမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ ဆောင့်ချက် ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ ၀င်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ကျေနပ် အားရနေတယ်။ သိပ်လိုချင်ခဲ့တဲ့ cuckold feeling ကို ကျွန်တော် ရနေပြီ။ လုပ်ချင်ပြီဆိုရင် စနစ်တကျ ၊ သေချာပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်အောင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း မ်ိန်းမကို နားလည်အောင် ပြောပြ၊ သူလက်ခံတော့ လူရှာ၊ ၂ ယောက်လုံး သဘောကျတဲ့သူကို ရွေး။ personality ကို သေချာစိစစ်၊ အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုယူ။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်မှုတွေ လုပ်ခိုင်း၊ မိန်းမ အဆင်ပြေတဲ့ ရက်ကို သေချာရွေးပြီးမှ ဒီလို နေ့မျိုးကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။ လိုးဆောင့်ချက် ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ မိန်းမလေး အလိုးခံနေရပြီ။ တအင်းအင်း … နဲ့ အံလေးကြိတ်ပြီး ခံစားနေရရှာတယ်။ မ်ိန်းမ မျက်နှာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမူအရာနဲ့ ထွက်နေတဲ့ အသံ၊ အလိုးခံနေရတဲ့ မိန်းမတကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။ မိုက်တယ်ဗျာ ကြည့်ရတာ........ တခါတခါ လှမ်းကြည့်တဲ့ မိန်းမရဲ့ အကြည့်တွေမှာ အားနာမှု ကျေးဇူးတင်မှု၊ မချိတင်ကဲ ခံစားရမှု။ အားရမှု .. တွေပါတဲ့ eye contact တွေဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ကို အရမ်းကြွစေတယ်။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော့်လိင်တံတောင့်တင်း ဖို့ကို တော်တော် ကြိုးစားယူရပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်၀၀ တောင်မတ်တာမျိုး မရှိပဲ၊ ပျော့နေတတ်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့် လိင်တံဟာ အခါတိုင်းတွေနဲ့ မတူပဲ တောင့်တင်းထောင်မတ်လို့ နေတာများ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် အံ့သြမိပါရဲ့။ မိန်းမကို လိုးနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကြည့်တော့ သူအလုပ်ကို သူလုပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်၊ ဘာပြီး ဘာလုပ် ဆိုတာကို သိနေတယ်။ မျက်နှာက မတည်လွန်း မပျော့လွန်းနဲ့ သူ့ပုံစံဟာ Professional ဆန်နေသလိုပဲ။ သူ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ နောက် position တစ်ခုကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ သူက ပက်လက်လှန်ပြီး လှဲချလိုက်တယ်။ စင်းပြီး ဖြောင့်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးဟာ အပေါ်ကို မတ်ပြီး အကျောတွေ ထောင်နေတယ်။ မိန်းမ သူ့အပေါ်ကို တက်ခွပြီးထိုင်ချလိုက်ချိန် အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ၀င်သွားတာကို အနီးကပ်ကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စကားလုံးမရှိပါဘူး။ အဖုတ်လေးဟာ ပြည့်နေအောင် စို့ထိုးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှတယ်။ ခါး အသာလှုပ်ရုံလေးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မိန်းမက စတယ်။ Position အသစ်ကို အနေအထား အံဝင်အောင် ထိန်းညှိနေတယ်။ လက်ကို ဟိုလူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် အသာထောက် အားပြု၊ တကိုယ်လုံး ထိုင်ထလုပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ခါးနဲ့ တင်ပါးကိုပဲ လှုပ်ပြီး အဖုတ်ထဲကို လီးကြီး ၀င်အောင် ဖိချပြီး လိုးနေတယ့် မ်ိန်းမရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။ ဖြေးဖြေးချင်း အရှိန် ရလာတယ်။ တင်ပါးကို နောက်ကော့၊ အဖုတ်လေးကို အပြင်ကို ကားနေအောင် ဖွင့်ပြီး လီးကြီးပေါ် ထိုင်ပြီး ကျိတ်ကျိတ် ဆောင့်နေတာများ၊ ကြည့်ရတတဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်မှာ အားရခြင်း၊ ကျေနပ်ခြင်းတွေနဲ့ပေ့ါ။ "ကို ဒီနားလာ" ငယ်က အပေါ်ကနေထိုင်ဆောင့်နေတာ အသာ အရှိန်လျော့ပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့နား ခေါ်တယ်။ ငယ့် ညာဖက်ကို သွား မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ ငယ်ရဲ့ လက်က ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို ဖွဖွ ဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နောက် အသာ ဆွဲပြီး ထုပေးပါတယ်။ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ပိုပြီး တောင့်တင်းမာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်ရဲ့ အတွေ့ကြောင့် ငယ်က ကျွန်တော့်မျက်နှာ အသာလှမ်းကြည့်တယ်။ မြင်းစီးနေရင်း ကျွန်တော့်ကို ဂွင်းထုပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး။ ဆံပင် ခပ်ဝဲ၀ဲကို ဘယ်ညာ အသာ ခေါင်းလေး ခါခါပြီး အပေးကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးနေတယ့် မိန်းမ၊ အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ကလေးနဲ့ အံကြိတ်ပြီး လိုးခံနေတဲ့ မ်ိန်းမ ဟာ ကျွန်တော် သိပ်လိုချင် ခံစားချင်ခဲ့တဲ့ hotwife တစ်ယောက်သာ cuckold husband တစ်ယောက်အပေါ် ပေးနိုင်တဲ့ အကျေနပ်စေနိုင်ဆုံးတွေ ပေးနေတာပါ။ ကျေးဇူးပါ မိန်းမရယ်။ ထုပေးတဲ့ အရျှိန် မြန်လာသလို၊ ဆောင့်ဆောင့်ချနေတယ့် ငယ့်ရဲ့ ကိုယ်ဟာလည်း ပိုအားပါပါလာတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ဆောင့်လိုက်တိုင်း လှုပ်နေတဲ့ နို့ ၂ လုံးဟာ စည်းချက်နဲ့အတူ ခုန်ပေါက်နေတယ်။ ငယ်ဟာ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ကို အလိုးခံနေတာပါ။ သူ့မျက်လုံးတွေမှာ မြင်နေရပြီ။ ယောင်္ကျားရှေ့မှာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အလိုးခံပြီး ကိုယ့်ယောကျာင်္းကို ကျေနပ်စေတဲ့ တကယ့် hotwife တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သူသွင်းလို့ ရသွားပြီ။ -----------------------------------
" ပုံစံပြောင်းရအောင်."... ငယ့်ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းတယ်။ ခါးကို အသာလျော့ ၊ ဒူးကို အနေတော် ထား၊ တင်ကို အနောက်ကို ကားဖွင့်ပြီး ပစ်ထားပေးလိုက်တယ်။ ငယ့်အဖုတ်ဟာ ဖောင်းအာပြီး အနောက်ကို ပြူနေမှာပါ။ အနောက်ဖက် တချက်လှည့်ကြည့်တော့ အဲဒိ ကိုလေးဟာလေ၊ သူ ဒါကို တော်တော် သဘောကျနေ.... ကိုလူစိမ်းရဲ့ ဒုတ်ကို သုံး လေး ချက် လောက် ထုပြီး ငယ့်အဖုတ်ကို တေ့ပေးတယ်လေ။ မိန်းမကို ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ထည့်ပေးတဲ့ cuckold စစ်စစ်ကြီး။ Doggy position ကို ငယ် ကြိုက်ပါတယ်။ ခပ်ရဲရဲ ခံယူရတယ့် ပုံစံမျိုးလို့ ခံစားရတယ်။ အနောက်ကို ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးလို့ရတော့..ပိုပြီး ထိထိမိမိ ရှိတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်လုံးအလှ မြင်ရတာမို့ ယောင်္ကျားတွေ လည်းသဘောကျတယ်လို့ ကို ပြောဖူးတယ်။ ခပ်မှန်မှန်လေး အ၀င်အထွက် လုပ်ပေးနေတယ်။ ၀င်လာတာ၊ ပြန်ထွက်သွားတာ၊ အတွင်းနံရံတွေ ပွတ်တိုက်သွားတာ၊ အားလုံးကို သေချာသိနေတယ်။ ဒီလို ဖြေးဖြေးမှန်မှန် နဲ့ နေရတာ တမျိုးခံလို့ ကောင်းတယ်။ ကို ငယ့် ခေါင်းရင်းနားကို လာထိုင်တယ်။ နားနား ကပ်ပြီး တိုးတိုး ပြောတယ်။ အသံ ခပ်ကျိတ်ကျိတ် နဲ့ လင်မယား ၂ ယောက် ပြောနေကြတယ်။ " ကောင်းလား ငယ် " "ဟုတ်...အဆင်ပြေပါတယ်" "ငယ် ဘယ်လို ခံစားရလည်း ဆိုတာ ကြားချင်တာ" "အော် ဟုတ်တယ် ၊ ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လွတ်ပေး၊ ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ပြီး ထည့်ပေးတယ့် လူကြီး.. ဒုတ်ကြိးကြိးနဲ့ အထည့်ခံရမှတော့ ကောင်းတာပေ့ါ ရှင် ကျမ ကို cuckold ဇာတ်သွင်းလိုက်တာလေ။ ရှင်နဲ့ တုန်းကထက် ပိုခံလို့ ကောင်းတယ်။ သိလား... ကဲ ..ဟုတ်တယ်...
."" " အား.. ငယ်ရယ် အဲလို ကြားရတာ ကောင်းလိုက်တာ.... ကိုယ် တအား တောင်လာပြီ.....အား....."' ငယ်သိတယ်.. ကို့ကို အဲလို ပြောပေးရင် သူ ပို စိတ်လာတယ်။ တောင်လာတဲ့ ကို့ဒုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်ထုပေးနေလိုက်တယ်။ ကိုက ငယ့်နောက်ကို အသာကျော်ကြည့်ပြီး တိုးတိုး ထပ်ပြောတယ်။ " ငယ့် ဖင်နဲ့ ကိုယ်လုံးတွေ၊ ကားနေတယ့် ပေါင်တံတွေ ကြည့်ပြီး ဟိုလူ ငယ့်ကို တကယ် စိတ်ပါနေတယ် ထင်တယ်"" အဲလိုလဲ ကြားရော ဒီတခါ စိတ်ထဲ တင်းခနဲ ဖြစ်သွားတာ ငယ်ကိုယ်တိုင်ပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို အထဲမှာ ရွှဲတက်လာတယ်။ သူလည်း သိပုံရတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။ ငယ့်ခါးကို ကိုင်ပြီး ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သူလိုးပြီ။ လေးဖက်ထောက်ထားတဲ့ ငယ် ...ရှေ့လက်နှစ်ဖက် မခိုင်တော့ပဲ အိပ်ယာပေါ် ခေါင်းကျသွားတယ်။ အဲလို မှောက်ကျသွားမှ အနောက်ကို ပိုကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး.. သူ့ရဲ့ လီးဟာ အထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြိး....လိုးတယ်။ "အ အ ...အိုး..." " အား........." ထိန်းထားတဲ့ ကြားက ငယ် အသံတွေ ထွက်မိရတော့တယ်။ ဆောင့်ရင်း ဘယ်ညာ ယိမ်းပေးတော့ အထဲမှာ နေရာမလပ်ပေါ့။ "' အ... ...အား... ကောင်းတယ်... ကောင်းတယ် ရှင်ရယ်.." "ဆောင့်ပေးပါ.... အဲလိုလေး.... ဖိဖိပြိးဆောင့်..." ငယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ... အနောက်ကို ပြန်ပြန်ပြိး ဆောင့်ပေးမိတယ်။ ကိုလူစိမ်း ဆီကလည်း အဟင်းဟင်းနဲ့အသံတွေ ထွက်လာတယ်။ ကိုက ငယ်တို့ကို ကြည့်ရင်း အံကြီး ကြိတ်ပြီး ဂွင်းထုနေတယ်။ အခန်းထဲမှာ ခပ်အုပ်အုပ် အသားချင်း ရိုက်မိသံနဲ့၊ တအင်းအင်း ညည်းနေကြတယ့် လူ ၃ ယောက်ဟာ တခုခုဆီကို လုံ့လပြု အားတင်း.. အရောက်သွားနေကြတယ်။ ""ငယ် ပြီးချင်ပြီ"
" အ....အ..... ဆောင့်ပေးပါ....
အဲလို ဖိဖိပြီး..." "အား.... ကောင်းလိုက်တာ... နာနာလေး..ဆောင့်ပါ ပြိးချင်ပြီ "
" အ .... အ.. ..အား...." ဆိုတယ့် ကိုလူစိမ်းဆီက အသံနဲ့ ငယ့်အထဲမှာ နွေးကနဲ အတွေ့မှာ..
" ပြီးပြီ. ငယ် ပြီးပြီ...အား....." ကောင်းလိုက်တာ...ပြိုင်တူ ပြီးရတာ.။
သူက အသာ ဆက်ဆောင့်ပေးနေတုန်း..။ ငယ့် အဖုတ်ထဲမှာ တဖြေးဖြေး အရည်တွေ ပြည့်ပြည့်လာနေတာ ခံစားရတယ်။ သူ့ဒုတ်ကို အသာ ဆွဲထုတ်သွားတယ့် အသိ၊ " Bro ၀င်တော့..." ဆိုတယ့် အသံကို ကြားရတယ်။ ကို့လီးက လေးဖက်ထောက်နေဆဲ ငယ့်အဖုတ်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ မှုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်လို ကြမ်းတော့တာပဲ။ အရမ်းး ကြမ်းတယ်... ကို့ဆောင့်ချက်တွေ။ " အား...ငယ့်အထဲမှာ အရည်တွေ ရွဲနေတယ်." အား....ကို ကြိုက်တယ် ကောင်းလိုက်တာ....အား....."" သိပ်အားပါတဲ့ ကို့ဆောင့်ချက်တွေကို အသာညှစ်ပြီး ကြိုပေးမိတယ်။ ခဏ အကြာမှာတော့.. " အ အ.. အား.." ကို့ အရည်တွေ အထဲကို ပန်းဝင်လာတယ်။ ကိုဟာ တအင်းအင်းနဲ့ ကျေနပ်စွာ ပြီးဆုံးချင်းကို ခံစားနေတယ်။ အထဲမှာ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အရည်တွေ ရောကုန်ပြီ။
လင်မယား ၂ ယောက် အိပ်ယာပေါ် အသာလှဲချမလို့ လုပ်တုန်း တံခါး ပြန်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကိုလူစိမ်း သူ့အခန်းကို သူပြန်တာ။ အိပ်ယာပေါ် ကို့ရင်ခွင်ထဲ ၀င်တော့.... ကိုက ငယ့်နဖူးကို အသာနမ်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ငယ်လေးရယ် တဲ့။ ကျေနပ်ခြင်း..၊ ပျော်ရွင်ခြင်းတွေနဲ့ ကို့ မျက်ဝန်းတွေဟာ အရည်လဲ့နေတယ်။ အမောဖြေရင်း ကို့ မျက်နှာကို ကြည့်နေမိတယ်။ ငယ်ခံစားချက်လား... ဟုတ်ကဲ့... ကြိုက်ပါတယ်၊ ပထမတော့ နည်းနည်း ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ဆိုပေမယ့် လိင်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အဲလို ကိုယ့်ယောကျာင်္းရှေ့မှာပဲ နေပြရတာကိုက ခံစားမှု တမျိုး။